7 Ụzọ Mụrụ Healthy ezie ejegharị | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Ụzọ Mụrụ Healthy ezie ejegharị
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 02/06/2020)
Na ugbu a akasiaha coronavirus atụba onye ọ bụla njem atụmatụ n'ime aghara, ọ na-esi ike ịma ma ọ bụrụ na ị ga- -gị na ezumike n'oge coronavirus ma ọ bụ ọ bụghị. Ezie na anyị nwere ike ime na-emere gị mkpebi ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-anọgide na na na ọ dị mkpa iji jide n'aka na ị na-ewere ihe iji chebe gị ahụ ike. Iji mee nke ahụ, ebe a na- 7 njem Atụmatụ enyemaka ị na-anọ ike mgbe ejegharị ejegharị.
Nọrọ Healthy ezie ejegharị Number 1: -Asa aka gị
Nke a nwere ike iyi ihe doro anya, ma saa aka gị bụ otu n'ime ụzọ kasị mma isi na-onwe gị ahụ ike. Gịnị? Dị ka National Health Service, “Ịsa gị aka n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-ewepu unyi, nje, na bacteria igbochi ha agbasa ndị ọzọ ndị mmadụ na ihe, nke nwere ike na-agbasa ọrịa ndị dị ka nri na nsi, flu ma ọ bụ afọ ọsịsa. Ọ pụrụ inyere nkwụsị ndị mmadụ si na-atụtụ na-efe efe na-agbasa ha ka ndị ọzọ”.
nanị tinye, aka saa ego n'anya Bibie nke niile gook ị akpọkọtara nile ụbọchị. Nke a na-karịsịa mkpa maka njem. Njem saịtị juputara ìgwè mmadụ ndị si gburugburu ụwa. Ọ bụrụ na a na puku ndị mmadụ kwa ụbọchị na-emetụ a otu doorknob, na dị nnọọ onye ahụ saa aka ya, na-eche otú unyi ọ ga-abụ!
Ọ bụrụ na ị na-na na na mpaghara na-enweghị zuru ezu na-agba ọsọ mmiri ma ọ bụ ncha, ị ga-mkpa iji jide n'aka na ị zụta na-eji n'aka sanitizer mgbe nile. Ezie na nke a nwere ike nkụ gị aka ma ọ bụrụ na-eji kwa mgbe, e nwekwara nsụgharị nke n'aka sanitizer na-agụnye moisturizing mmiri otú i nwere ike nwere ọcha aka na juu akpụkpọ.
Ọ na-ogologo a mara na ọ bụghị na-ehi ụra zuru ezighị-emetụta dịghịzi usoro. Mgbe ezumike na ọ pụrụ iyi ka a ezi echiche na-ebili na mgbape nke ala na-agba gburugburu ruo n'etiti abalị. Otú ọ dị, eziokwu bụ na ihi ụra bụ ihe ndị ọzọ impactful karịa ị ga na-eche. N'abalị, ahụ anyị na-ewe oge rejuvenate na ọbụna ịgwọ. The obere oge ị na-eji na slumber n'aka ndị obere oge ị ga-enwe ike-elekọta onwe gị.
N'ezie, ọmụmụ ọbụna gosiri na ndị na-adịghị ehi ụra zuru ike na-ata ahụhụ na-adịgide adịgide mmetụta ọjọọ ndị dị otú ahụ dị ka ọbara mgbali elu na ebe nchekwa na ọnwụ. Ndị a nwere ike na-amụba mgbe ejegharị ejegharị, ya mere, mee onwe gị a ihu ọma na-eme ka n'aka na ị see hay maka a kacha nta nke awa asaa a n'abalị.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike isi ike ịnweta zzz gị ma ọ bụrụ na i kwagara ọtụtụ oge oge ma ị na-arịa ọrịa jet lag, i nwere ike iji ọtụtụ ụzọ dị iche iche na-enyere gị ahu zuru ike na kpafuo anya ụra. Ndị a gụnyere ndị a na-ekpo ọkụ ịsa ma ọ bụ bath, lavender-esi ísì ụtọ ịgba, na-atụgharị uche, na ọbụna a na-ekpo ọkụ cup tii. Na mpempe, na-ọtụtụ nke na-ehi ụra dị oké mkpa ka enyemaka ị na-anọ ike mgbe ejegharị ejegharị.
Marseilles na tiketi maka Lyon Train
Paris na tiketi maka Lyon Train
Nọrọ Healthy ezie ejegharị Na Zere Kpatụ Water
Ọ bụrụ na ị na-aga ebe dị nnọọ amaghị, ọ kwesịrị doro anya na ị ga-mkpa izere mgbata mmiri. Gịnị? N'ihi na ụmụ nje n'ime obodo mmiri na-region-kpọmkwem, na / ma ọ bụ gootu bacteria na-bụghị mgbe niile njikere aka ha. Ọtụtụ puku ndị mmadụ kwa afọ na-arịa ọrịa mmanya obodo mmiri, na mmetụta ndị dị otú ahụ dị ka vomiting na afọ ọsịsa nnọọ nkịtị. Dị ka a n'ọnụ, mkpisi iji mmiri karama mgbe ọ bụla ị na-na na anya nke gị nkasi obi mpaghara. Nke a na-aga nke mmadụ abụọ maka ebe na sketchy ọcha omume. Ndị ọzọ na-erughị mba ndị mepere emepe nwere ike iji na-aṅụ mmiri si otu ebe dị ka ụlọ mposi ọrụ ebe. Ee, na nke ahụ bụ a ihe!
Ọzọkwa, jide n'aka na ị hydrate ọma. Hot okpomọkụ na ikike ọrụ ndị a ngwa ngwa tiketi na a ọgwụ enweghị ịṅụ mmiri.
Nweta gị gbaa
Dabere na ebe ị na-aga, i nwere ike mkpa iji nweta pụrụ iche gbaa ke a njem n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ahụ ike ndị ọzọ na-elekọta center. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'ihi na ụfọdụ obere mba ndị mepere emepe, nke ka egwuregwu ọrịa dị ka ịba na-acha odo odo fever. Tupu ị gaba na gị na njem, ịlele Ụlọ Ọrụ nke Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) website. Ebe i nwere ike chọpụta ndị a chọrọ kpọmkwem maka mba ahụ ị na-ejegharị ejegharị. Ọ bụrụ na ị bụghị si United States, ị nwekwara ike ịlele gị obodo website, dị ka NHS, maka gị chọrọ maka ahụ ike njem.
Mụrụ Healthy: Adịghị emetụ gị Face
Dị ka anyị na-ama-ekwu banyere aka saa, ugbu a ọ bụ oge ikwu banyere ihu gị. Ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ndị mmadụ na-ezu ike isi ha na aka-ha, scratching ihe oko, ma ọ bụ n'ụzọ na-emetụ ihu ha. Ọ bụ a siri ike àgwà na-agbaji ma na-aka gị pụọ n'ihu gị ma ọ bụrụ na ị na-agbalị nwere ezi ahụ ike mgbe ejegharị ejegharị.
Ọ bụ ihe ezi uche na, dị ka aka gị na-emetụ nnọọ ọtụtụ ihe nile ụbọchị. on a ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ụgbọelu na, ị ga-enwe tree table, na seatbelt. iche iche ndị ọzọ nkịtị ohere ebe na ị na-emetụ. Ọ bụrụ na ị na-na-asa aka gị oge ọ bụla ị na-emetụ ihe (ma ọ bụ ime-yi uwe), ọ bụ a mma echiche na-aka gị anya ihu gị mgbe niile.
Ọ na-eme uche na ị na-aga eri nri nke ọma mgbe ezumike, nri? Ka emechara, ihe Spain enweghị chocolate na churros, na ihe na-France enweghị a baguette? Nke a abụghị ihe anyị pụtara, Otú ọ dị.
tọrọ ụtọ nri bụ niile nke ọma na ezi, ma gị mkpa iji jide n'aka na ị na-ahụ nri dị ka nke ọma. Soro nri pyramid na ịgbanwee ndị miri-eghe goodies maka ụfọdụ elu ọ bụla mgbe a na mgbe. Ọ bụrụ na ị nwere ohere maka ya, wetara vitamin na ị na-na-onwe gị stocked elu. Jide n'aka na-eme ka vitamin c, probiotics, na ndị ọzọ na-adị mfe na-eri vitamin.
Nke a bụ ihe kasị mkpa ka mmanya na-aba n'anya mgbe ejegharị ejegharị dị ka nke ọma. Ọ na-ọma mara na-aṅụbiga mmanya ókè nwere ike ime ka a zie dịghịzi usoro (na ụfọdụ ndị ajọ omume hangovers). Ọ bụrụ na ị na-agbalị iji zere na-arịa ọrịa, jide n'aka na ị na-gị na-aṅụ oké mmanya na a kacha nta. Ka emechara, who wants to visit the Mona Lisa with a common cold?
Ikpeazụ Mụrụ Healthy NDỤMỌDỤ: Hichaa Your Area
O nwere ike ịbụ a hassle, ma ọ bụ ọnụ ahịa na-eweta ụfọdụ disinfecting ekpochapụ tinyere gị mgbe ọ bụla ị na-eme njem. Gịnị? Iji hichapụ ihe niile ndị tree tebụl na oche na anyị na-ama kwuru okwu ya. Clorox ekpochapụ ike zụrụ ke nnukwu na-etinye n'ime ziplock bags. Ị nwere ike mgbe ahụ ka ha na ị na gị ebu on.
Jide n'aka na-ehichapụ na armrests, seatback n'akpa uwe (ma ọ bụrụ na i nwere otu), na ọbụna seatbelt ikechi na gị disinfectant na enyemaka hụ na gị na ebe anọ dị ka dị ọcha dị ka o kwere.
Ndị mmadụ na-arịa ọrịa mgbe ejegharị ejegharị karịa ihe ọ bụla ọzọ. Emela ka onye ọ bụla ọzọ. -Elekọta onwe gị na ojiji Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Ụzọ Mụrụ Healthy ezie ejegharị” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / tr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ na-asụ asụsụ nke gị nhọrọ.